सडकको जाम हटाउने विद्यार्थीको जुक्ति ! | Hakahaki
सडकको जाम हटाउने विद्यार्थीको जुक्ति !
काठमाडौं । शुक्रबार कोटेश्वरमा अचम्मै भयो । सवारी साधनको जाम नै भएन । प्राय: तीनकुने, भक्तपुर र बालकुमारीबाट आउने सवारी साधनले एकदमै जाम हुने कोटेश्वरमा शुक्रबार दुईवटा फ्लाइ ओभर ब्रिज देखियो । एउटामा तीनकुनेबाट बालकुमारी जाने सवारी साधन चलिरहेका थिए भने अर्कोमा बालकुमारीबाट भक्तपुर जाने सवारी साधन । सवारीहरुको एक आपसमा भेट नै नभएपछि जाम नभएको हो ।
यो दृश्य वास्तविक नभएर काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या विद्याश्रम माविको शैक्षिक प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले तयार पारेको कोटेश्वर जक्शनको थियो ।
स्थानीय स्रोत र सामग्रीको प्रयोग गरेर कक्षा ९ मा सिभिल इञ्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीहरुले यस्तो नमूना जक्सन तयार पारेका हुन् । नमुना कोटेश्वर जक्सन निर्माण सहभागी कक्षा ९ की छात्रा समीक्षा ओझाले आफुहरुले बनाएको जस्तै जक्शन बनाउने हो भने कोटेश्वरको जाम सजिलै अन्त्य गर्न सकिने बताइन् ।
यस्तै कक्षा ११ मा सिभिल इञ्जिनियरिङ अध्ययनरत् मनिषा घिमिरेको टोलीले काठमाडौंको जाम हटाउन सडकको नयाँ मोडेल तयार पारेको देखियो । ठूला संरचना निर्माण भइसकेकाले काठमाडौंको सडकलाई अब बढाउन सम्भव नभएपछि सडकमाथि अर्को रुफ कन्ट्रक्सन गरेर फ्लाइ ओभर ब्रिज बनाउनु पर्ने मोडेलमा विद्यार्थीहरू देखाइएका थिए । अब काठमाडौंको जाम अन्त्य गर्ने यही मात्रै उपाय हो भनेर आफूहरुले सडकको मोडल बनाएको घिमिरेले बताइन् ।
कक्षा १० मा अध्ययनरत् श्रद्धा दासको टोलीले पनि सडक व्यवस्थापनका लागि भनेर फरक शैलीको फ्लाइ ओभर ब्रिजको मोडेल तयार पारेको थियो ।
“धेरै जाम हुँदा बिद्यार्थीलाई समयमा स्कूल र कलेज पुग्न गाह्रो छ, कर्मचारीलाई कार्यालय पुग्न समस्या छ । त्यसैले जाम हटाउनका लागि हामीले यो मोडेल तयार पारेका हौं” दासले भनिन् ।
यस्तै टोलीकी मनिसा हुमागाईंले यो मोडेल लागू गर्ने हो भने एम्बुलेन्स र दमकल जाममा फस्न नपर्ने दाबी गरिन् ।
शैक्षिक प्रदर्शनीमा सिभिल इञ्जिनियरिङ, विज्ञान, गणित र स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित विभिन्न ७० स्टल प्रदर्शन गरिएको थियो भने कक्षा ६ देखि १२ कक्षा सम्मका ४ सय विद्यार्थीहरुले स्थानीय स्रोत सामग्रीकै प्रयोग गरेर सामूहिक रुपमा निर्माण गरिएका सामग्री प्रदर्शन गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरुले शिक्षाको साथसाथै शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रदर्शन गरेर आफूलाई सक्षम बनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयले वर्षैपिच्छे यस्तो शैक्षिक प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने गरेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी हुमागाईंले जानकारी दिइन् । उनले शुक्रबार ७० विद्यालयका झण्डै ४ हजार शिक्षक विद्यार्थीले प्रदर्शनीको अवलोकन गरेको समेत बताइन् ।